ဂဏန်းလေးလုံးဖြင့် အသက်ကိုသိစေနည်း | အိမ့်မှူးသော်
ha ha ha!!!! Already know the last two digit of birth year.Save your Energy.no need to calculate.
ုမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါဆိုနေမှ... ha ha ha လာလုပ်နေတယ်...already know ဆိုရင်ဆက်မကြည့်တော့နဲ့ပေါ့...... knowledge and sharing ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်........
ဆုံဆည်းရာ မြန်မာစားသောက်ဆိုင် 6:36 PM
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် ဂဏန်း ၄ လုံး စိတ်ကြိုက်ရွေးမယ်နော်...၉၉၉၉ ဆိုရင် ရမလား
အကို့ အဖြေကို ကိုးကားပြီး ပြန်တွက်တာပါ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ မေးခွန်းမှာ ပြင်မေးဖို့လိုပြီ။